Top 30 Romantic Getaways dị nso na United States
- Ebe ihunanya ihunanya dị gị nso -
Ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ ịpụ na nrụgide nke ndụ kwa ụbọchị ma soro ndị ị hụrụ n'anya nwee oge dị mma. Kedu ụzọ ka mma ime nke a karịa ịga njem?
Enwere ọtụtụ ihunanya ihunanya na United States, site n'ụsọ osimiri ruo n'elu ugwu, obodo akara ngosi ruo obere obodo, ebe a na -ere mmanya ruo n'ọdọ mmiri.
Mmemme ịhụnanya ndị a n'ime United States dị mma maka ndị hụrụ n'anya, ma ọ bụ maka mgbapụ izu ụka ma ọ bụ ogologo njem. Gaa n'ihu ịgụ iji mụtakwuo.
N'okpuru bụ ụfọdụ ụzọ ihunanya ihunanya dị gị nso:
1. Ndagwurugwu Napa, California
Site na ọmarịcha ala ya, ụlọ mmanya na-atọ ụtọ, na ụlọ oriri na ọ -ụ worldụ ụwa, Ndagwurugwu Napa bụ n'ezie otu n'ime njem ihunanya kachasị na United States.
Mgbe ị gara na Ndagwurugwu Napa, enwere ọtụtụ ihe ihunanya ime na a ga -emebi gị maka nhọrọ.
Flightgbọ elu balloon na -ekpo ọkụ bụ otu n'ime ụzọ na -akpali akpali ịmalite ụbọchị na ndagwurugwu ma ọ bụrụ na ị na -eme njem. Ọ bụrụ na ị na -ahọrọ ala siri ike, mee njem ụgbọ oloko izu ike gbadaa na ndagwurugwu ahụ.
Nri abalị abụọ na nlele ọdịda anyanwụ nke Ndagwurugwu Napa gụnyere na nhọrọ mgbede.
Akwụkwọ ọgwụgwọ spa nke di na nwunye na Ndagwurugwu Napa, nke nwere ụfọdụ ọmarịcha akụrụngwa na mba ahụ. A maara Calistoga maka ịsa ahụ apịtị, mana ị nwekwara ike nweta ọgwụgwọ spa nkịtị.
Debe nri abalị ihunanya abụọ kwa abalị nke ịnọ n'ụlọ nri nke na -eri nri na ọnụ ahịa dị iche iche. Bistro Jeanty bụ onye France zuru oke ụlọ oriri na ọ thatụ thatụ na -enye nri na -atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ pasta na-atọ ụtọ, gaa Oenotri, ma ọ bụ ọ bụrụ na ị na-eme mmemme pụrụ iche, nweta ndoputa na ebe a na-asa akwa French ama ama n'ụwa niile!
Gagharịa n'ogige ntụrụndụ mpaghara ma ọ bụrụ na ị nwere ekele na mpụga, ma ọ bụ gaa na ugwu nke Saint Saint Helena, nke kachasị elu na mpaghara, maka njem siri ike n'ezie.
Ọ bụrụ na ihu igwe na -enye ohere isi n'Ọdọ Mmiri Berryessa dị nso maka ụgbọ mmiri kayak ma ọ bụ njem ụgbọ mmiri n'elu mmiri na igwu mmiri n'ime oghere zoro ezo.
Nke a bụ otu n'ime ụzọ mgbapụ ihunanya dị gị nso.
Nke a bụ otu n'ime ezumike ịhụnanya kacha mma na United States. Mgbe ndị mmadụ na -eche maka ọpụpụ ịhụnanya na United States, Seattle abụghị ebe mbụ na -abata n'uche.
Ka o sina dị, Emerald City bụ ebe ihunanya na United States n'ihi oke ugwu ya na ọmarịcha echiche ya.
Ma ị nọ na Seattle otu ụbọchị ma ọ bụ atọ, ị ga -ahụ ọtụtụ ihe omume ihunanya ị ga -eme di gị ma ọ bụ nwunye gị.
Were ụkwụ gbadaa na Alki Beach, gbaa nnukwu wiilị (ma zuo nsusu ọnụ site n'aka ndị ọzọ dị mkpa), were were karama mmanya were mee mmanya na Golden Gardens Park - otu n'ime saịtị kachasị nwee ịhụnanya n'obodo ahụ!
Tupu ụbọchị emee, gaa na Magnolia Buff's Discovery Park maka ọdịda ọdịda ịhụnanya n'ezie.
Ọ bụrụ n'ezie na ịchọrọ iju onye gị na ya na -akpa anya, were ụgbọ elu ụgbọ elu ma ọ bụ, onye maara, ezumike rafting mmiri ọcha!
Ọtụtụ ndị amaghị na Dallas nwere ihe niile mere ịbụ otu n'ime obodo ihunanya kachasị na United States.
Ma ị na -eleta Dallas maka otu ụbọchị ma ọ bụ ngwụsị izu, mara na enwere ọtụtụ mmemme ihunanya ị ga -eme.
Site n'ịchụ nta foto ruo ịppingụ mmanya na inweta ọgwụgwọ spa nke di na nwunye, Dallas nwere ihe maka di na nwunye ọ bụla.
Mee ka ụbọchị ụbọchị gị bụrụ ihe na -atọ ụtọ site na ịga na DMA, ma ọ bụ Dallas Museum of Art. DMA na -eme ka ọnụ ụzọ ya meghee ruo ụtụtụ nke Fraịde ọ bụla. Were ihe ọ drinkụ atụ n'ụlọ mmanya ihe ngosi nka wee nwalee echiche mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọhụrụ.
Ị nweghị ike ịga n'ụlọ ezinaụlọ obodo ma a bịa n'ihe oriri. Gaa na Town Hearth, dịka ọmụmaatụ, maka nnukwu nri na ụtọ dị ịtụnanya. Ọ nweghị ihe dị ka isoro onye gị na ya na -ekerịta nri na -atọ ụtọ iji meziwanye njikọ gị.
Gini mere ị gaghị eme njem ịhụnanya site na Dallas ozugbo ị nwetara ihe kacha mma obodo a nwere inye? Texas jupụtara obodo na ubi dị ịtụnanya nke bluebonnets. Nke a bụ aro ụfọdụ maka ezumike okporo ụzọ Texas.
4. Igodo West, Florida
Key West, nke kachasị mma na Florida Keys, bụ agwaetiti pụrụ iche na ihunanya dị ihe dị ka kilomita 90 site na Cuba ma dị mma maka njem izu ụka site na Miami.
Ọ nwere ihe niile nke ịbụ otu n'ime saịtị ihunanya na United States!
Ọdịdị dị n'agwaetiti ahụ, agwakọtara ya na vistas na-akpali akpali nke oke osimiri, na-eme Key West ka ọ dị ka nke ọ bụla ọzọ.
Ọzọkwa, njem ị ga -aga na Key West adịworị anwansi: agwaetiti a jikọtara ya na ala site na akụkọ mgbe ochie "Overseas Highway," otu n'ime njem ndị mara mma America.
Ihe omume ihunanya n'àgwàetiti ahụ gụnyere anwụ na Smathers Beach, na -eleta ọmarịcha Key West Butterfly na Nature Conservatory, na -eri dolphins, na ọbụna na -anya ụgbọ mmiri na -aga na National Park Dry Tortugas.
Agwaetiti a bụ otu n'ime ebe ikuku na -asọ asọ na mba ahụ, oke osimiri turquoise na -eme ka ọ dị gị ka ị nọ na paradaịs.
Tapas ndị Spain na Bodega Santiago na ihe eji megharịa ọnụ na kafeeti ihe nrite 'Mma karịa Sx' bụ nhọrọ kacha mma maka nri abalị. Ebe abụọ a nwere ọkụ gbara ọchịchịrị, na -eme ka ha dị mma maka ụbọchị ịhụnanya.
Nke a bụ otu n'ime ezumike ịhụnanya kacha mma na United States. Ọ bụ ezie na ị nwere ike ị gaghị ese Washington, DC dị ka njem ezumike ịhụnanya na United States, ọ na -abụkarị ebe nwere ihunanya na ụlọ oriri na ọ exụ restaurantsụ mara mma.
Washington, DC bụ obodo gbabiri na akụkọ obodo anyị, na -eme ka ọ bụrụ nnukwu ebe ịnọ izu ụka ma ọ bụ ikekwe otu izu.
Otu n'ime ihe ihunanya ị nwere ike ime na DC bụ isoro onye ọpụrụiche gị zụọ ahịa na Georgetown otu ụbọchị.
Mgbe ahụ gaa hụ ihe nkiri na Kennedy Center mgbe nri abalị gachara na mmanya mmanya Barcelona ma ọ bụ Filomena Ristorante.
Ndị obodo na -enwe mmasị iri nri pịkụl na nnukwu ụlọ ahịa mba na karama mmanya mgbe ha na -ewere nlegharị anya nke akara obodo ahụ n'ụbọchị efu ha.
Mgbe nri ehihie, ọtụtụ ndị mmadụ na -aga ebe ngosi nka ma ọ bụ abụọ (Smithsonian National Museum of Natural History bụ nhọrọ a ma ama) tupu ha eriwe nri na ọkacha mmasị dịka Gourmet Farmers or Zaytinya.
Ememe Ifuru Cherry bụ ihe a ga-ahụrịrị! Mgbe okooko osisi cherry na -ama ifuru, efere mmiri dị na DC na -atụgharị pink na ọcha, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe ncheta obodo ahụ ka ị na -ama ifuru.
Mechie ụbọchị ahụ site na njem gaa na DC City Center maka ịzụ ahịa ma ọ bụ nri abalị (ma ọ bụ ha abụọ!).
Okporo ámá site n'oge gara aga. Ihe owuwu ahụ dị egwu. Ụsọ osimiri dị egwu. Ọzọkwa, Saint Augustine, Florida, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ bụ otu n'ime ndị na -ahụ maka ihunanya na United States!
Saint Augustine, obodo kacha ochie na America, juputara na nlegharị anya akụkọ ihe mere eme na obodo mara mma nke ị ga -achọ ịhụ na ndị ọzọ dị mkpa.
Ọzọkwa, Saint Augustine bụ ụzọ dị mma iji nọkọ ọnụ oge dị mma, site na iri nri n'ụlọ nri ezinụlọ wee na-agagharị n'okporo ụzọ ya ndị mara mma na-ejide aka.
N'ime ụbọchị, gaa na ọtụtụ saịtị akụkọ ihe mere eme, dị ka Castillo San Marco. Mgbe ahụ gaa n'ụsọ osimiri ma ọ bụ otu n'ime ogige steeti gbara agbata obi.
N'agbanyeghị ihe ị na -eme, ahapụla obodo ahụ na -enweghị ịga njem mmụọ! Saint Augustine, dị ka obodo kacha ochie na United States, nwere ọtụtụ ebe nsogbu.
Ihe ọ bụla masịrị gị, Saint Augustine bụ otu n'ime ezumike ịhụnanya kacha elu na United States!
Ọ dị mfe ịhụ ihe kpatara San Francisco ji bụrụ otu n'ime ụzọ ezumike ịhụnanya US kachasị maka ndị di na nwunye, nwere ọmarịcha panoramas, ọdịda anyanwụ n'akụkụ osimiri, yana nri ama ama n'ụwa.
Ndị a ma ama Golden Gate Bridge, ụlọ ndị Victoria mara mma, ụgbọ ala cable, na ọdịbendị dịgasị iche iche bụcha akụkụ nke nnukwu obodo a na -eme mkpọtụ.
Obodo a dị square kilomita 7 na-enye ahụmịhe ịhụnanya dị iche iche nke dabara na nhọrọ mmefu ego dị iche iche, site na nnwere onwe ruo na okomoko zuru oke.
Ọ bụrụ na ịse ntụrụndụ nke ọma bụ echiche gị n'ehihie ihunanya, ị nwere ike ịga na Golden Gate Park wee mikpuo n'ime oke osimiri a. Maka ezumike dị jụụ, tụlee ịkwọ ụgbọ mmiri na Stow Lake mgbe ị nọ n'ogige.
Ọ ga -abụ ihe nzuzu ịghara ịga ije n'ụsọ osimiri n'ụsọ osimiri ka ị na -eche ọdịda anyanwụ n'obodo a nke a maara dị ka obodo n'ọnụ mmiri.
Ndị na -eri nri kwesịrị ịga leta ụlọ Ferry, nke nwere ndị na -ere nri dị iche iche, ụlọ ahịa ndị ọrụ aka, na oporo na champeenu maka mgbede ọchị na ihunanya.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịgwọ onwe gị na mgbede ịhụnanya, bịa na Saison ma ọ bụ Quince maka menu nri dị oke ọnụ nke ga -eme ka ị ghara ikwu okwu.
Iji mechie ọmarịcha ngwụcha izu ụka, kwọọ ruo Twin Peaks ma soro di gị ma ọ bụ nwunye gị na -akpachi anya ka ị na -ele ọkụ obodo na -enwu n'okpuru gị.
Elela anya karịa Beaufort, South Carolina, maka obodo mara mma nke dị n'akụkụ osimiri juputara na ihe na -enye aka ịkọrọ onye ị hụrụ n'anya.
N'ihi omume enyi, ile ọbịa, akụkọ ihe mere eme, na ịma mma a na -ahụ n'akụkụ niile, Beaufort mere eme bụ otu n'ime obodo kacha nwee ihunanya na United States.
Mpaghara 304-acre, nke juputara na nnukwu ụlọ akụkọ ihe mere eme-tụgharịrị-ihunanya n'okpuru osisi oak nke kpuchiri akpaetu Spanish, na-enye agwa na ịma mma n'obodo ahụ.
Were mkpagharị mkpagharị n'akụkụ aka mmiri Henry C. Chambers Waterfront Park, wee zuru ike nwa oge n'otu n'ime mmiri na-eche ihu ikiri ụgbọ mmiri na-abanye na mmiri.
Inyocha ihe boutiques, ụlọ ahịa oge ochie, na ebe ngosi nka n'akụkụ okporo ụzọ dị nso.
Gbago na steepụ pụrụ iche pụrụ iche nke ụlọ ọkụ ahụ maka ọmarịcha echiche nke Hunting Island State Park. Mgbe ahụ, n'oge mgbede, gagharịa n'akụkụ osimiri dịpụrụ adịpụ ka ịchọọ nduru na ájá.
N'ikpeazụ, kwụọ ụgwọ ụgbọ mmiri ga -eburu gị njem njem ọdịda anyanwụ na -enweghị atụ na ụlọ oriri na ọfrontụ waterụ mmiri dị n'akụkụ mmiri Saltus River Grill.
Di na nwunye nwere ike ịnụ ụtọ ihunanya nke njem Lowcountry na South Carolina ruo ọtụtụ ụbọchị!
Miami bụ otu n'ime obodo kacha nwee ịhụnanya na America, n'agbanyeghị onyonyo ya dị ka oriri na nkwari abalị.
Enwere ọtụtụ ihe ihunanya ị ga -eme na Miami, site na nzụlite dị egwu na vistas osimiri ruo nka, ebe ngosi ihe mgbe ochie, na ebe nri.
Ọzọkwa, ọdịdị okike nke Miami na -enye ọnọdụ dị mma maka ezumike ịhụnanya. Nnukwu osimiri ọcha dị na South Beach na mmiri doro anya kristal dị mma maka izu ike.
Njem ịhụnanya ihunanya na South Pointe Park Pier bụ ụzọ kachasị mma iji kwụsị ụbọchị osimiri. Di na nwunye na -amasịkwa ịgagharị n'okporo ụzọ mmiri Miami, ọkachasị njem ọdịda anyanwụ na Biscayne Bay.
Iji gbakwunye na ikuku, ọtụtụ na -etinye nri ma ọ bụ egwu egwu. Ọ bụrụ na nri abalị n'oké osimiri abụghị nke gị, Miami nwere ọtụtụ nhọrọ iri nri ihunanya ndị ọzọ.
Little Havana bụ otu n'ime mpaghara kacha ukwuu maka ndị di na nwunye na -eri nri. Isi nke agbata obi a mara mma bụ Calle Ocho, SW 8th Street, nke bụ dị mma maka ịkekọrịta ụfọdụ nri Cuba mpaghara.
A makwaara Miami maka nka ya, ebe ngosi nka Vizcaya bụ otu n'ime saịtị ihunanya kachasị na obodo iji chọpụta nka.
Ọ bụ ụlọ mara mma nke nwere ọmarịcha ụlọ, ihe owuwu mara mma na nchịkọta nka nke onye nwe ya gara aga.
Gwa gị na Naples, Florida, bụ otu n'ime ọtụtụ njem ihunanya dị na America.
Ọzọkwa, Naples, nke dị na Southwest Florida, gbara osimiri ndị mara mma gburugburu nwere aja ọcha na mmiri turquoise, yana ikuku dị jụụ na ihunanya.
Ihe kacha nwee ịhụnanya na Naples bụ ịga n'ụsọ osimiri - ma ọ bụ maka ọdịda anyanwụ, ọdịda anyanwụ, ma ọ bụ njem ehihie, ndị di na nwunye agaghị enwe mmechuihu.
Ndị di na nwunye nwere mmetụta nke njem nwere ike ịga ụgbọ mmiri ọdịda anyanwụ ma ọ bụ ịkwọ ụgbọ mmiri. Cheta ka ị na -ele anya dolphins! Naples Pier bụ ebe ịhụnanya ọzọ na -ekiri ọdịda anyanwụ.
Ogige Ntụrụndụ Everglades bụ ihe ọzọ di na nwunye kwesịrị ịhụ. Njem nlegharị anya dị maka ndị di na nwunye inyocha anụmanụ buru ibu, mangroves n'ụsọ oké osimiri, na nlegharị anya ndị ọzọ.
Ewezuga ọmarịcha ebe okike mara mma, Naples nwekwara ihe bara nnukwu uru: Okporo ụzọ Fifth mara mma nke South.
Ọ nwere mmetụta Beverly Hills na ọ bụ ebe na -atọ ụtọ iji nọrọ mgbede. N'aka nke ọzọ, Naples bụ ọmarịcha ebe ezumike oyi na United States ebe ọ kpọrọ nkụ ma nwee oge obi ụtọ.
Ezigbo nri, ụlọ ihe nkiri, ịzụ ahịa, ụlọ ahịa kọfị, ebe a na -ese ihe nka, na ebe nkiri ndị ọzọ nwere ike ịhụ na mpaghara a.
Ọtụtụ ụlọ oriri na ọ provideụ provideụ na -enye awa obi ụtọ, yabụ na ọ bụ ihe obi ụtọ ịga otu maka ihe ọ drinkụ andụ na ihe oriri wee gaa ebe ọzọ maka nri abalị.
Ụlọ oriri na ọilsụ Saụ Sails, nke dị nso n'okporo ụzọ nke ise, bụ otu n'ime nnukwu ụlọ oriri na ọ Naụ Naụ Naples. Ọ na -enye nnukwu pasta arụrụ n'ụlọ, steak na ọmarịcha ihe ụtọ, a makwara ya maka nri mmiri ya.
11. Berkshires, Massachusetts
A maara Berkshires, nke dị n'ime ime obodo ọdịda anyanwụ Massachusetts, maka ugwu ha na obere obodo.
Ọ bụ otu n'ime ndị na -ewu ewu na -esi na Boston na New York City, nke dị ihe dị ka awa atọ.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, Berkshires mara mma nke ukwuu, na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ.
Ụzọ mkpagharị maka ọkwa ikike dị iche iche dị, yana akụkụ nke ụzọ Appalachian gafere ugwu ahụ. Ị nwekwara ike iburu ọmarịcha ụgbọala gaa n'elu ma ọ bụrụ na ịga njem abụghị ihe gị.
N'ụbọchị doro anya, vistas panoramic na -agbatị ruo Vermont na New Hampshire site na nzuko ahụ. Ị ga -enwe ike kpakpando n'abalị doro anya.
Mee njem gburugburu obere obodo Berkshires, dịka Stockbridge, Lee, na Lenox. Ụlọ ahịa oge ochie, ụlọ ahịa izugbe nwere ngwongwo mpaghara, na ebe a na -ese ihe osise nọọrọ onwe ha.
Gbalịa Red Inn Inn na Stockbridge maka ịta ata, nke na -enye nri dị ụtọ na ọnọdụ okomoko Victoria, ma ọ bụ ikuku nke ogige ha.
Njem ime ime obodo ezughi oke na -akwụsịghị n'ugbo obodo. Ịtụ mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri bụ ọrụ ọzọ a ma ama; dabere na oge, ị nwere ike chọpụta apụl, ọka, mkpụrụ osisi, na ugu. Ị nwedịrị ike ibelata ùkwù okooko osisi gị n'ugbo ụfọdụ.
Ọ dị mkpa ịmara nke a tupu anyị aga n'ihu. Charleston bụ otu n'ime obodo kacha dabara maka ezumike ihunanya na United States, ọkachasị n'oge mgbụsị akwụkwọ, ebe ihu igwe na -adị nro, ikuku na -adịtụ ntakịrị, ụbọchị dịkwa mkpụmkpụ.
Ọnọdụ zuru oke maka ihunanya na -aga n'okporo ụzọ gas a ma ama na Charleston. Tụkwasị na nke a, na ikuku ikuku a, ị ga -anụkwa anwụrụ ọkụ na -esi na mpio anwụrụ ọkụ apụta.
Ọ bụ ezie na ihu igwe n'oge mgbụsị akwụkwọ na Charleston na -abụkarị n'afọ ndị 1970 na 1960, ndị nọ na Charleston na -ahụ ya ntakịrị oyi ma na -adabakarị n'ime abalị.
Ọnọdụ ihu igwe a dị mma nwere ike ọ gaghị adị mma n'akụkụ osimiri, mana ọ dị mma nke ukwuu maka ịgagharị. Nhọrọ ndị na -atọ ụtọ gụnyere njegharị Charleston mere eme na njegharị ụlọ mmanya. Asịrị nwere ya
Charleston zuru oke maka ndị na -achọ mmụọ mmụọ, yabụ ị nwere ike gbagoo n'ime ụlọ mmanya ma ọ bụ chọpụta ụlọ mkpọrọ obodo ochie mgbe ọchịchịrị gachara.
Ọzọkwa, Charleston nwere ọmarịcha ebe iri nri, ọ ga -abụ ihe ihere ịhapụ ya. Nri dị elu na-agụnye Husk na Fig, yana akwa brunch ọdịnala dịka Magnolia ma ọ bụ Poogan's Porch.
13. Mpaghara mpaghara ọdọ aka, New York
Nke a bụ otu n'ime ezumike ịhụnanya kacha mma na United States. Di na nwunye na -achọ njem ihunanya na United States kwesịrị ịgbakwunye Mpaghara Ọdọ Mmiri Finger dị na New York na ndepụta ndị chọrọ ịga.
Watkins Glen dị n'ụsọ Ọdọ Mmiri Seneca, ebe dị mma maka ndị di na nwunye na -achọ ihe omume ihunanya.
Detuo njem anwansị Ezi Ịhụnanya na Ọdọ Seneca, ebe ị ga -ewepụta oge ihe nkiri ịhụnanya na 1940 na 1950.
Ndị ọrụ ụgbọ mmiri ahụ nabatara ndị ọbịa efere efere chiiz mpaghara na otu iko mmanya mpaghara. Enwere blanketị ka ị nwee ike ịkasi ibe gị obi.
Ndị hụrụ mmanya n'anya ga -achọ inyocha okporo ụzọ Wine Lakes. 4,444 wineries mpaghara pụrụ iche na mmepụta Riesling, mmanya na -egbu egbu, na mmanya jụrụ oyi.
Maka ndị chọrọ iri nri dị iche iche, ị nwere ike itinye ebe a na -eme biya ma ọ bụ abụọ, ma ọ bụ ọbụna ebe a na -eme biya ole na ole; Overwom sɛ na madi mfirihyia 100 de, nanso meyɛɛ m’adwene sɛ megyae.
Ma ọ bụ jiri oge dị jụụ na -agakọ n'okporo ụzọ Watkins Glen State Park ọnụ. Site na nsụda mmiri 19, ị ga -achọpụta na otu mara mma karịa nke ọzọ.
Ọ na -ewe ihe dị ka awa abụọ iji gafee ọmarịcha ọmarịcha a, ma nọgide na -enwe mmasị na mpaghara ahụ ma na -ese foto! Ná ngwụsị nke ụbọchị, na -agagharị na ọdọ mmiri ọdọ mmiri Seneca.
Ịnọdụ ala na bench aka, na -ekiri ụgbọ mmiri ahụ na -alaghachi n'ọdụ ụgbọ mmiri ya. Nke a bụ ụzọ zuru oke iji kwụsị njem ịhụnanya na mpaghara Finger Lakes!
Otu n'ime ebe kachasị mma maka ezumike ịhụnanya na United States bụ Oahu! Ọ nweghị ihe dị mma karịa Hawaii, agwaetiti Hawaiian a bụ maka onye ọ bụla.
Ndị njem nwere ike nweta ndụ obodo n'agwaetiti ndị mara mma.
Ma ị nọrọ na Oahu ruo ụbọchị atọ ma ọ bụ karịa, ụfọdụ ihe nkiri na -ewu ewu maka ndị di na nwunye gụnyere Ogige Botanical Ho`omaluhia (nke a na -ejikarị maka foto ndị mara mma na Instagram), Obodo Haleiwa, Polynesian Cultural Center, Kualaoa Ranch, Ala Moana Center, na Pali Lookout.
Enwere ọtụtụ ihe ihunanya ị ga -eme na Oahu. Dị ka ịnụ ụtọ ịhịa aka n'ahụ ndị dị n'akụkụ osimiri, na -atọ ụtọ mmanya, na -eleta Waikiki, na -eme njem helikọpta nkeonwe.
Ọzọkwa, na -ege egwu egwu Hawaii n'ụsọ osimiri, ịgbazite ọdọ mmiri cabana nkeonwe, yana ịnụ ụtọ ezigbo luau, yana ọbụna iji dolphin na -egwu mmiri!
Nke a bụ ebe kacha mma maka nri abalị ihunanya. Merriman dị na Waikiki na -enye nri na -atọ ụtọ na otu n'ime mmanya kacha mma Mai Tai n'ụwa (onye na -emebi ihe: ejiri ụfụfụ lilikoi kpuchie ya!)
Ọzọkwa, enwere ọmarịcha echiche nke Waikiki Beach. Agbanyeghị, ị nwere ike chọọ iri nri ehihie na efere Hawaii, ma ọ bụ pịgharịa site na a gwongworo nri mpaghara ma rie ihe n'ụsọ osimiri mgbe ị na -ele ọdịda anyanwụ.
N'agbanyeghị mkpebi ọ bụla ị na -eme, Oahu nwere ike gboo mkpa gị wee mepụta ezumike na -agaghị echefu echefu jupụtara na ihunanya.
Massachusetts bụ ala dị warara na mpụta dị n'akụkụ ụsọ oké osimiri mba a maara na ọ nwere nnukwu ebili mmiri na aja dị nro.
Ebe ikuku ya na -adọrọ mmasị, ọdọ mmiri dị jụụ nke igwe ji esi mmiri ọkụ, na ọmarịcha ụlọ ọrụ nka, ọ siri ike ịghara ịhụ obodo azụ azụ a nke Capo Cod, ịhụnanya.
N'ezie, maka ebe ị ga -enwe naanị kilomita abụọ n'obosara, ị ga -eme ya chọta ọtụtụ ihe ihunanya ị ga -eme.
Dịka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịnụ ụtọ ije ihunanya n'akụkụ mmiri nke na -asọba n'ọhịa na apịtị na ebe nchekwa Wellvest Wildlife nke Wellfleet Bay.
Iji nwee ọmarịcha ụbọchị osimiri n'etiti dunes, gaa n'ụsọ osimiri Cahoon Hollow. Ị nwekwara ike nyochaa Beachcomber a ma ama, obere ebe na -akwado ụfọdụ egwu sitere na Bogename.
Na ngwụcha ụbọchị, nwee Nostalgia ma a bịa Wellfleet Didchin. Maka ihunanya ihunanya, kpochie mpịakọta lobster na mmanya iji nye ọdịda anyanwụ n'ụsọ mmiri ọdụ ụgbọ mmiri.
Will ga -ahụ ọtụtụ ụlọ nri mara mma na Wellfleet na -enye efere azụ ọhụrụ, gụnyere ama ama “Wellfleet oysters.
Ikekwe otu n'ime ebe ihunanya kacha eri nri bụ PB Boulangerie Bistro, uwe ime ụlọ nri French. Mana ọ bụrụ na ịnweghị ya nwere okpokoro, echegbula.
Ị nwere ike were decadent abụọ nke croissants chọkọletị ka ha zuo oke iji nụrụ ụtọ ihe ndina n'ụtụtụ echi ya.
Las Vegas bụ otu n'ime ọgba aghara ihunanya na United States maka ọtụtụ ihe kpatara ya. Obodo nwere ebe nkiri pụrụ iche, ebe nrọ na -atọ ụtọ, yana ọtụtụ ihe dị n'èzí iji mee maka ndị hụrụ njem n'anya.
Ọzọkwa, mmiri Las Vegas zuru oke, ọ naghị ekpo oke ọkụ ma ọ bụ oke oyi.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ maara, Las Vegas maka egwuregwu, ị drinkingụ mmanya na oriri, obodo ahụ na -enye ọtụtụ ihe nkiri maka ndị na -achọ ịpụ na cha cha.
Ọtụtụ ihe ị ga -eme na Las Vegas na -amalite na warara. N'ịbụ nke a maara dị ka Las Vegas Blvd, ọnụ ọnụ bụ ebe a na -ahụ nnukwu casinos niile. Akụkụ pụrụ iche nke warara ahụ bụ isi mmalite Bellagio.
Ahụmahụ nke Bellagio isi mmalite ịgba egwu na -adọrọ mmasị, ile ọbịa nke na -ama jijiji na ụkpụrụ ụlọ Tuscan ya na ọdọ mmiri aka ya ebe isi mmiri gbara egwu maka ihu igwe pụrụ iche na ọmarịcha ngosi, na ọnụego ọtụtụ egwu.
Ebe nkiri ndị ọzọ sitere na Las Vegas Strips gụnyere ugwu New York Russia, ije ije na Eiffel Tower na Paris, yana Ọrụ Circus na Circus Circus.
Maka ndị hụrụ nri n'anya, gaa na nri nri Las Vegas bụ ihe kwesịrị. Fọrọ nke nta casinos na -enye nri nri na onye ọ bụla nwere ọtụtụ ụlọ nri na kichin dị iche iche iji dowe papillae na -atọ ụtọ dị iche iche.
17. Ekwentị, Alabama
Ọ bụrụ na gị na onye gị na ya na -emekọ ihe, na -adị mma mgbe niile igwu egwu Rhett Butler na Scarlett or`hara, onye jiri ifufe gaa, yabụ ekwentị, Alabama bụ ebe zuru oke igwu egwu efu ahụ.
Obodo a dị jụụ na etiti ụsọ oké osimiri Gulf na -agafe amara na ile ọbịa nke ndịda, ọ dịkwa mfe ịnụrụ onwe m dị ka a ga -asị na alaghachila m azụ n'oge ruo narị afọ nke iri na itoolu.
N'etiti obodo, nnukwu ụzọ dị ka Dauphin Street na St. Francis Street bụ nnukwu udo nke oge agha na -aga n'ihu, nke nnukwu osisi gbara ya na akpaetu Spanish na -ekogide na alaka ha.
Ụfọdụ ebe obibi ndị a ugbu a bụ nke ọha na -emepere dị ka ebe ngosi ihe mgbe ochie. Ihe kacha mma n'ime ndị a bụ ikekwe ụlọ Oakleigh, nke e wuru n'ụdị ịlọ ụwa nke Gris, na ozugbo ọ nọrọ n'ụlọ onye na -ahụ maka owu bara ọgaranya.
Ọ bụ ezie na ihu igwe dị nro na -eme ka ekwentị mkpanaaka na -eleta n'oge ọ bụla n'afọ, ọ bụ ebe ezumike mmiri na -adọrọ mmasị karịsịa na United States. UU, ọkachasị n'ihi ememme nzọ ụkwụ Azalea na mbido oge.
N'ihe dị ka ọkara nke abụọ nke Mach, a na -achọ obodo ahụ niile na okooko osisi azalea pink na ọcha, na ọtụtụ ihe pụrụ iche na -eme ugbu a. Maka nri abalị ihunanya, gakwuru nna.
Ọ bụrụgodi na ọ bụ ụlọ mmanya na ụlọ oriri na ọ Mexicoụ Mexicoụ Mexico, ị nwere ike iche na a na -ebuga ya n'ime ime obodo Tuscan mgbe ọ na -anọdụ n'èzí n'ogige na -adọrọ mmasị.
Nke a bụ otu n'ime ezumike ịhụnanya kacha mma na United States. Onye ọ bụla na -eche na Hawaii bụ ebe ezumike ezumike mara mma. Ka a sịkwa ihe mere Kona, HI bụ ezumike ịhụnanya zuru oke maka di na nwunye ọ bụla na United States.
Maka ndị di na nwunye hụrụ osimiri n'anya na nri pụrụ iche Hawaiian, mpaghara Kona nwere ọtụtụ ihe dị ebube ịme.
Makalawena Beach bụ otu n'ime osimiri ndị mara mma nke Hawaii. Ọ nwere osimiri aja aja mara mma (na nro), ebe dị mma iji nọrọ otu ụbọchị n'ụsọ osimiri.
Bay nwekwara ọdọ mmiri maka ikiri ndụ mmiri. Ọ bụrụ na ị nwere ihu ọma, ị ga -ahụdị mbe mbe mmiri na -eri algae.
Papa Kona zuru oke maka brunch ihunanya Sọnde. Mgbe ị na -ede akwụkwọ, biko jụọ maka ọkwa mmiri pụrụ iche, ebe tebụl pere mpe.
Nke a nwere nlele panoramic, ị nwere ike họrọ nri ụtụtụ Hawaiian ma ọ bụ American.
Oge nzuzu ha, nsen a na-eme n'anwụ na efere nri ụtụtụ Hawaii, achịcha ehi, gravy na osikapa, na kọfị Kona nke otu aha na-atọ ụtọ.
Kona bụ ebe kachasị mma maka ndị di na nwunye na -achọ ezumike ebe okpomọkụ na United States.
Nke a bụ otu n'ime ụzọ mgbapụ ihunanya dị gị nso. Ọ bụrụ na ị na -achọ njem ihunanya na -atụghị anya ya na obodo America dị ọnụ ala, tụlee ịga Cleveland, Ohio.
Nke a bụ obodo ọdọ mmiri na -enweghị nkọwa nke nwere etiti ọdịda anyanwụ. N'agbanyeghị ụdị ihunanya gị, enwere ihe maka mmadụ niile.
Maka ndị nwere mmasị na ọdịbendị na akụkọ ihe mere eme, Cleveland nwere ọtụtụ ebe ngosi ihe mgbe ochie, dị ka akara ngosi Rock na Roll Hall of Fame na Cleveland Museum of Art, nke bụ otu n'ime ebe ngosi nka nka kacha mma na mba ahụ.
Ị nwekwara ike lelee ihe ngosi Broadway n'otu n'ime ụlọ ihe nkiri mere eme na Playhouse Square, ma ọ bụ lelee otu egwu ụwa a ma ama Cleveland na Severance Hall.
Iche na okike na nnukwu ọpụpụ kwesịrị ekwesị maka ọsọ gị. N'okwu a, ị nwere ike pụọ na Elliwater Park Beach (osimiri obodo dị na Ọdọ Erie na Cleveland) wee gaa mkpagharị ịhụnanya site na Cleveland Cultural Garden.
Ma ọ bụ, lelee ọdịda anyanwụ dị egwu n'elu Ọdọ Erie site na Stestice Steps na Lakewood Park ma ọ bụ E 9th Street Pier n'ime ogbe ndịda.
Mgbe nyocha niile mere agụụ gụ gị, Cleveland nwere ọtụtụ narị ụlọ nri ịhọrọ.
Ụfọdụ ụlọ oriri na ọ romanticụ moreụ na -atọkarị ụtọ gụnyere L`Albatros, nke na -enye nri French ọgbara ọhụrụ, yana Marina W nke dị elu, nke na -enye efere nri mmiri ma na -enye echiche dị egwu nke Ọdọ Erie.
Nke a bụ otu n'ime ụzọ mgbapụ ihunanya dị gị nso. Obodo Cincinnati mara mma dị n'akụkụ Osimiri Ohio ma bụrụ ebe dị mma maka ọpụpụ ịhụnanya.
Cincinnati, Ohayo ngwa ngwa wee bụrụ ebe ezumike ewu ewu n'ihi na agbalitela mpaghara akụkọ ihe mere eme dị ka OverTheRhine (OTR) ruo n'ókè ụfọdụ iji mepụta ụlọ ọrụ nka, ụlọ ahịa mara mma, wdg. Nke a bụ ebe oriri na -eme nke ọma.
Nwee ọmarịcha ọdịda anyanwụ n'Ogige Iden, na -agagharị n'akụkụ osimiri na Smel's Riverside Park, ma ọ bụ kirie ihe ngosi na nnukwu ụlọ egwu egwu na Cincinnati.
Ndị lụrụ di na nwunye nwere ike nweta mkpali na Kings Island, ogige ntụrụndụ kacha ukwuu na Midwest, ebe nri nwere ike ịga na Cinlaynati mere eme Findlay Market.
Ọdịbendị ịba ọgaranya nke Cincinnati na -enye ndị di na nwunye ohere ịga leta ọtụtụ ụlọ ọrụ nka dị ka Rhinegeist, MadTree na Taft Ale House. Enwere ike iji njegharị ebe a na -eme biya na bọs biya ịgbatị ahụmịhe ahụ.
Sotto bụ otu n'ime ebe kacha nwee ịhụnanya n'obodo, dị n'okpuru obere cafes n'okporo ámá nke na -enye nri nri Italiantali mara mma.
Banye okpuru ulo ọkụ kandụl, nke kpuchiri ákwà ngebichi velvet uhie, tebụl osisi, na mbinye aka ya nke e ji aka mee.
Ụlọ oriri na ọ romanticụ Anotherụ ọzọ na -ahụ n'anya bụ Orchids na Palm Court. Onye meriri AAA Five Diamond Award dị na Hilton Holland Plaza ma bụrụ ahụmịhe iri kacha mma na Cincinnati.
Oge ezumike osimiri nwere ụfọdụ ihunanya dị ịtụnanya, na Kauai bụ nhọrọ kacha mma na Hawaii.
Ọ bụghị mmadụ juru eju ma wuo ya dị ka agwaetiti ndị ọzọ ama ama dịka Oahu ma ọ bụ Maui, nke na -enye gị ohere ịkwụsịlata kpamkpam, zuru ike ma nwee ọ timeụ ọnụ ọnụ n'agwaetiti ahụ.
Ọ bụ ezie na ọ bụ obere agwaetiti, ọ nweghị ihe na -ahụ n'anya.
Mee atụmatụ ịga Osimiri Waimea, nwee ọmarịcha ihe nkiri, guzoro n'akụkụ Wailua Falls na -ebigbọ ma ọ bụ mee njem ụgbọ mmiri gaa n'ụsọ osimiri Na Pali nke agaghị echefu echefu. Ọ bụrụ na ọ bụ njem ọdịda anyanwụ, ị nwere ike nweta isi ihe ihunanya. Ọdịda anyanwụ
Nke a bụ na Sea Glass Beach bụkwa ọpụpụ ịhụnanya. Maka ndị lụrụ di na nwunye nwere mmasị, ị nwere ike mee njem nlegharị anya nke ọhịa dị n'okirikiri ebe ị nwere ike gafee ọwa mmiri mmiri ochie maka ndị di na nwunye nwere mmasị.
Nọdụ ala n'okpuru ọkụ gbara agba gburugburu Jehova gwongworo nri na ịlele nri dị iche iche n'okporo ụzọ. Nke a bụ ụbọchị ịhụnanya.
Njem na Hawaii na -enweghị ịnwale Poke ezughị oke. Kealia Poke na -enye ọkwá Poke omenala. A bịa nri ụtụtụ, enweghị ike iti Haupia Mac Nut French Toast na Anuenue Cafe.
N'agbanyeghị ụdị gị, Kauai nwere ike gboo mkpa onye ọ bụla ma bụrụ ebe zuru oke maka ezumike osimiri ihunanya. Ọ baghị uru ikwu, Kauai na -eme ọmarịcha njem ncheta na United States.
22. Ọdụ ụgbọ mmiri, Maine
Maka ndị njem na -achọ ezumike ihunanya n'ụsọ osimiri Maine dị jụụ, Bar Harbor agaghị emechu gị ihu.
N'ịbụ nke dị na onyonyo zuru oke nke Frenchman Bay, obodo a na -eme njem bụ ọkacha mmasị maka ndị lụrụ nwanyị na -achọ ịlụ nwanyị chọrọ ịgbanahụ ọrụ obodo na ndụ.
Ụlọ oriri na ọoodụ seụ mmiri mmiri ya, mbara ihu ikuku, ụlọ ahịa juputara na ọrụ aka, na ikuku dị jụụ na-adọta ndị na-achọ izu ike ma soro ndị ha hụrụ n'anya kporie ndụ.
Omume ihunanya n'oké osimiri na ala juru eju. Bar Harbor Inn na-ele anya na ogbe ndịda obodo ma na-enye obere njem ụgbọ mmiri.
Ọzọkwa, maka ndị di na nwunye na-ahụ maka okike, ikiri whale bụ ọmarịcha ọrụ ihunanya.
Ụlọ ọrụ a na -akpọ Bar Harbor Whale nke dabara adaba na -enye njem nlegharị anya dị iche iche n'ụbọchị, gụnyere ohere ikiri puffins n'agwaetiti ndị dị nso.
Kedu ihe nwere ike ihunanya karịa ime njem n'ọhịa mgbe ụbọchị gachara n'ụsọ osimiri? Ogige Ntụrụndụ Acadia, nke dị n'akụkụ Bar Harbor, nwere ọmarịcha njem mkpagharị.
Di na nwunye nwere ike mechie ụbọchị ahụ na picnic (ma ọ bụ ejiri ice cream mee!) n'elu ahịhịa dị na Agamont Park, nke bụ ihe ọtụtụ mmadụ na -eme na mgbede ọ bụla.
Chọọ nri abalị lobster n'otu n'ime ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ downtụ dị n'ime ime obodo, dị ka Stewman Lobster Pound, maka nri ihunanya. Enwekwara ike ịkekọrịta ihe ọ atụrinụ na Paddy's Irish Pub.
Nleta na Bar Harbor dị ụtọ nke ukwuu na ị ga -achọ ịnọ ogologo oge ma ọ bụ lelee oke osimiri Maine niile. Nke a bụ atụmatụ ezumike ezumike n'ụsọ osimiri Maine niile. Nwee obi ụtọ!
Mgbe ị na -eche maka ezumike ịhụnanya kacha mma America, Denver, Colorado nwere ike ọ gaghị abụ obodo izizi na -abata n'uche. Kedu ihe ihere bụ nke a!
N'ihi na Denver bụ nnukwu njedebe maka njem ihunanya gị na ndị ị hụrụ n'anya.
Obodo a nwere ọtụtụ nri, ntụrụndụ, wdg, ha niile bụ ịhụnanya. Na -aga ije na aka n'okporo ụzọ a ma ama nke 16th Street na Denver wee malite njem ịhụnanya a na America.
Nke a bụ ụzọ kacha mma ndị ọbịa ga -esi hụ ama ama ama Denver ka ha na -edobe isiokwu ihunanya.
Na -esote, gawa na Larimer Square wee na -agagharị n'okpuru ọkụ na -egbu maramara dị n'okporo ụzọ - nke a bụ agbata obi kacha akụkọ ihe mere eme nke Denver (ebe ọ malitere) yana ezigbo ebe maka nri abalị ihunanya.
Nhọrọ ndị mara mma gụnyere Osteria Marco, echiche Italiantali nkịtị na nke mara mma nke na -adị ka iri nri na Italytali. Ma ọ bụ gaa na Ocean Prime, ebe ị nwere ike nweta ụfọdụ nri mmiri kacha mma na freshest na Denver.
N'ikpeazụ, The Isi Obodo Grille bụ ihe na -atọ ụtọ na -atọ ụtọ. N'ikpeazụ, gaba n'ụlọ ebe a na -eme ihe ngosi na The Clocktower Cabaret maka ụfọdụ ntụrụndụ mmetụta mmetụta.
Ị nwere ike igwu egwuregwu abalị na-atọ ọchị, uwe mwụda, ihe nkiri circus, na ndị ọzọ na ndị di na nwunye ndị ọzọ! Ihe ngosi niile na -ewere ọnọdụ na mmekọrịta chiri anya, nke ndị Paris.
Ị chọrọ ịhụ mpaghara a karịa? Mgbe ahụ gaa njem mmụta otu ụbọchị site na Denver gaa Glenwood Hot Springs, nke bụ njem elekere 2.30 site na obodo ahụ.
Were ya na ị na -ekiri kpakpando ka gị na onye gị na ya ga -anọ na -enwe ntụsara ahụ iji nọrọ na -ekpo ọkụ.
Iyi na -ada ụda n'aka nri gị, yana ọkụ ọkụ kandụl batrị, na -ahazi ụlọ ntu gị, mee ka abalị ahụ nọrọ jụụ na ihunanya n'etiti gị abụọ.
Ọzọkwa, abalị Sedona bụ ihe ihunanya dịka ụbọchị nọ n'ogige ịta ahụhụ ya dịpụrụ adịpụ.
Nkume na -acha ọbara ọbara nke pine na -acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ gbara gburugburu na -eme ka ndabere bụrụ nke zuru oke naanị ijikọ ọnụ wee nweta ihe niile ị hụrụ n'anya.
Ọ bụghị ihe ijuanya na Sedona bụ otu n'ime ọtụtụ ebe ihunanya Arizona. Isi echiche bụ ụfọdụ nke ị na -ahụghị ebe ọ bụla ọzọ n'ụwa.
A naghị ahụta ịma ụlọikwuu ka ọ bụrụ ihe ihunanya ọdịnala kacha amasị, mana enwere ihe pụrụ iche iji pụọ na ya wee nọrọ ọnụ. Sedona bụ njem ịhụnanya zuru oke maka ndị na -anụ ọkụ n'obi n'èzí.
Njem nlegharị anya, igwu mmiri, kayak na ịkụ azụ na -adọta ndị di na nwunye na -arụsi ọrụ ike si n'akụkụ ụwa niile.
Ịkwakọba picnic na karama mmanya ọ họọrọ ka ọ nwee ọ enjoyụ n'akụkụ nkeonwe n'okporo ụzọ ndụdụ ọdịda anyanwụ dị nso na -eme nnukwu njikọta ihunanya na njem. Grosseria ọnụ n'abalị ma na -aga n'okporo ụzọ n'ehihie.
Ihe ị họọrọ ime na Sedona, ịma mma ya na ebe obibi ya na -eme ka ihunanya ihunanya zuru oke na United States.
25. Malibu, Kalifonịa
Malibu bụ ebe zuru oke maka ihunanya ihunanya n'ụsọ osimiri California. Agbanyeghị na ọ dị n'ime County La, Malibu ka nwere obere ikuku nke na -eju ọtụtụ ndị ọbịa anya na nke mbụ ya.
Obere ụlọ oriri na ọ shopsụ andụ na ụlọ ahịa bara ụba karịa agbụ na ụzọ mara mma nke si n'ụsọ Oké Osimiri Pacific na -ekwekọ.
Ụsọ mmiri ndị a abụghị ihe ijuanya, na -adọrọ mmasị. Ị nwere ike ịchọta ihe niile dị na Malibu site n'ụsọ osimiri buru ibu, dị mma maka ịnọdụ ala ma ọ bụ igwu mmiri ọnụ ọnụ ọnụ ugwu ka ndị na -eme njem na -eburu ibu.
Ọtụtụ ogige kachasị amasị ụlọ niile dị na Malibu bụ steeti Matador, n'ihi ọmarịcha oke okwute ị nwere ike inyocha. Echiche ndị ahụ dị egwu, nke a bụ ebe zuru oke ịnụ ụtọ ọdịda anyanwụ ihunanya.
Ebe mara mma maka nri abalị dị ozugbo n'ọdọ mmiri a na -akpọ Ugbo Malibu, nke na -enye ọnụego ihe ọkụkụ ọhụrụ na mpaghara n'okpuru ndabere nke oke osimiri Pacific.
Ikuku ahụ na -ezu ike na ihunanya ma nwee nnukwu nhọrọ mmanya dị.
Ọ bụrụ na -amasị gị ịgagharị, Leo Carrillo State Park dị naanị kilomita atọ n'akụkụ ugwu steeti El Matador ma na -enye ụzọ nke ihe isi ike niile a na -enweta n'ime afọ.
Malibu na -enyekwa ihe niile site na họtel ndị dị n'akụkụ osimiri ruo ụlọ ndị mara mma maka ime mgbanwe na echiche gị.
Ọ bụrụ na ị na -achọ ọnụnọ osimiri na -ezu ike ma ọ bụ izu ụka na -akpali akpali na -ejikọ ọnụ, Malibu bụ ebe zuru oke maka ezumike na United States maka di na nwunye ọ bụla.
Santa Fe bụ nnukwu obodo ileta ihunanya ihunanya na United States, ọkachasị ma ọ bụrụ na -amasị gị ịnọ n'èzí ma nwee ọmarịcha nka nka.
Obodo ochie a mere ihe akụkọ nwere ebe ngosi nka nke ụwa na ọtụtụ veranda nwere onwe ya na imesi ike na ndị na -ese ihe na akụkọ ihe mere eme.
Santa Fe bụ isi obodo kacha ochie na United States yana kwa isi obodo nke obere obodo.
Ihe e ji mara obodo ahụ bụ nka. Ị nwere ike inyocha New Mexico Art Museum na Museum of Native Contemporary Arts, n'etiti ndị ọzọ.
Ị nwekwara ike ịga ebe nkiri ndị ọzọ, dị ka Santa Fe Square na San Miguel Chapel (ụlọ ụka kacha ochie na United States, wuru na 1610).
Enwere ọtụtụ ụlọ nri nri Mexico dị na Santa Fe ịhọrọ, mana maka abalị pụrụ iche, ị nwere ike nwalee Saxon. Ụlọ oriri na ọ beautifulụ beautifulụ mara mma nke nwere ebe a na -anọ anọ n'èzí ka ị nwee ike iji kandụl rie nri.
Onye siri nri sitere na Mexico City ma na -enye kichin ọhụrụ. Enwere ọtụtụ ebe pụrụ iche ịnọ na Santa Fe, site na domes ruo tipis ma ọ bụ ikuku na -aga.
Ọ bụrụ na ị na -achọ mgbapụ ugwu ịhụnanya, Aspen bụ otu n'ime ebe kachasị mma ịga United States. N'ịbụ nke dị n'ugwu Rocky nke Colorado, ọmarịcha ebe a Anars nwere ọtụtụ ihe ọ ga -enye.
Site na nlele na-akpali akpali, a maara obodo a maka ụzọ mkpagharị ya gburugburu ụwa, ụlọ oriri na ọ upụstaụ dị n'elu, ski kacha elu, na mgbịrịgba mmiri.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na -ewusi onwe gị ike na mgbịrịgba aja aja site n'isi ụzọ, na -aga n'ime ọdọ mmiri, ma ọ bụ ọbụna na -aga n'akụkụ ọdọ mmiri ahụ, a ga -akwụ gị ụgwọ ụfọdụ n'ime echiche panoramic kacha mma nke obodo.
Ilele Alba Nke a bụ otu n'ime ahụmịhe anwansị ị nwere ike inwe na onye gị na ya na -emekọ ihe, mee ya ọmarịcha njem di na nwunye!
Aspen bụkwa ebe enwere ọtụtụ ụzọ okirikiri. Ebe mgbazinye igwe kwụ otu ebe dị n'obodo ahụ ma na -enye ọmarịcha ụzọ iji hụ Aspen na odida obodo gbara ya gburugburu n'ụzọ dị mma.
Gagharịa n'okporo ụzọ iji gaa ụfọdụ ụlọ ahịa na cafes. Were kọfị na achịcha dị iche iche na Paradaịs Cafe ma ọ bụ gaa bistro French Alpine maka nri dị ụtọ!
Ọ bụrụ na ị nwere ike oge, n'aka nri, ọdịda Aspen dị egwu.
A na -etinye osisi Aspen n'ugwu okwute okwute dị egwu na akwụkwọ ọla edo ha, ọ nweghịkwa ihe dị mma karịa ịgagharị n'ugwu n'oge a!
Maka oke ikuku ihunanya, Portland, Oregon, nwere ihe niile, site na mpaghara ejiji na mpaghara ịzụ ahịa ruo n'ụlọ nri mara mma na ihe ntụrụndụ na ihe omume ihunanya n'èzí.
Mod Fam Global na -atụ aro ịmalite ịga ije na North Avenue North Mississippi site na North Portland.
Naanị ugwu nke Lloyd District na Eliot site na Osimiri Willamette, Mississippi Ave. nwere ụfọdụ ụlọ oriri na ọ romanticụ romanticụ ịhụnanya kacha mma na Portland, site na nhọrọ izu ike, dịka Prostback, dịka prot, People Pig (gaa GoAdiggererestaurant) Mesen Ice Cream Thai, na ihe ịchọ mma ruby ​​gourmet.
Were oge ahụ na Pistilis Nurfery maka ụlọ nyocha na -atọ ụtọ na macrame, staghorn, na ịrịgo mgbakọ ma ọ bụ ikpo okwu 101.
Ọ bụrụ na egwu bụ nke gị, chọgharịa ndekọ Mississippi maka ụlọ ahịa Oldschool na onye nkesa na -ere obere ngwakọta maka $ 4.
Maka njem ihunanya nwere nlele nrịgo 360 nke Portland, Oke ugwu, na osimiri Willamette, gaa n'ugwu. Tebọ.
Ọzọkwa, ọtụtụ kilomita nke okporo ụzọ mkpagharị osisi nwere efere mmiri dị na okirikiri, yana ọtụtụ ebe ịkwụsị na ịnụ ụtọ echiche.
Site na Willamette, ị ga -ahụ ebe ihunanya dịka Voodoo donut, yana ihe okike dị ụtọ dị ka ịdị jụụ nke lemon, obere onyinye nwere kuki caramel, na Graham ịkọwapụta ntakịrị.
Mechie njem ihunanya gị site na Portland site na njem ụgbọ mmiri ma ọ bụ ịgagharị n'ubi LAN, n'ime anya nke nkwụsị Portland ọzọ mara mma, Akwụkwọ Powell.
Solvang, California, bụ otu n'ime ihunanya ihunanya pụrụ iche na United States?
A maara dị ka 'America Di Little Denmark,' a maara ndị Danish a nọ na California maka ime ụlọ, ikuku ikuku, na ọmarịcha ala, nke mere ka ọ bụrụ ebe kachasị mma maka izu ụka ịhụnanya.
Dị na mpaghara Santa Barbara, Solvang nwere ihe maka ụdị di na nwunye niile na -achọ njem ịhụnanya.
Na -agagharị n'etiti Solvang na -achọ ụlọ ahịa achịcha achịcha Danish zuru oke n'otu n'ime ọtụtụ ebe a na -eme achịcha, detụ mmanụ olive dị iche iche na osisi oliv dị iche iche, na -agagharị, wee chọta ihunanya na zoro ezo ma na -ekpo ọkụ na Gaviota State Park, ma ọ bụ na -enyocha ọmarịcha ụlọ mmanya. na tastings. Ụlọ dị na Solvang, Santa Ynez na Los Olivos.
Mgbe enwechara ihe nkiri ihunanya n'ehihie, enwere ọtụtụ ụlọ oriri na ọ forụ forụ maka ọmarịcha nri abalị na kandụl.
Mad & Vin nọ na Landsby Hotel dị egwu, yana nnukwu menu mmanya na ihe oriri na -atọ ụtọ, na First & Oak nke Mirabelle Inn nwere nri mpaghara ọhụrụ nke a na -arụ dị ka obere efere zuru oke maka isoro ndị enyi kerịta.
Solvang, California bụ ebe mma, ụtọ, na nkasi obi jikọtara ọnụ na obodo kacha atọ ụtọ. Solvang bụ otu saịtị ezumike kacha mma maka ndị di na nwunye.
Nke a bụ otu n'ime ezumike ịhụnanya kacha mma na United States.
Glenwood Springs (Glenwood Springs) A bịa na ebe ntụrụndụ ugwu ugwu ihunanya, a ga -emerịrị ọnọdụ niile. Ebe a na -aga alpine nwere ọmarịcha ọdịdị ala, isi iyi na -ekpo ọkụ, na ọtụtụ ebe ị enjoyụ ezigbo mmanya na nri.
Iron Mountain Hot Springs na Glenwood Hot Springs bụ isi iyi ọkụ ọkụ abụọ ama ama n'obodo. Ha niile na-enye akụrụngwa dị iche iche dabara adaba, dị ka spa na ụlọ oriri na ọ siteụ -ụ dị na saịtị.
Tieshan Hot Spring nwere ihe karịrị ọdọ mmiri 16. Agbanyeghị na Glenwood Hot Springs nwere nnukwu aha, ọ nwere ọdọ mmiri kpụ ọkụ n'ọnụ kacha ibu n'ụwa.
Njem a nke dị kilomita abụọ na-eduga n'ọdọ mmiri mara mma turquoise, n'oge na-adịghị anya ọ ga-abụkwa otu nkwụsị ọkacha mmasị gị na njem njem gị na Colorado. Maka eserese ihunanya, weta nri pịkị na ụfọdụ champeenu na -egbu maramara.
Rifle Falls State Park dị na mpụga Glenwood Springs. Ọ nwere otu n'ime nsụda mmiri na -adọrọ mmasị na mba ahụ. Enwekwara ọtụtụ ụzọ ụkwụ na ije ije na -atọ ụtọ.
Iji nweta ahụmịhe yiri anụ, biko gaa na Glenwood Adventure Park. Were otu ụbọchị ịnya ụgbọ ala na -atọ ụtọ marshmallows. Agbanyeghị, ihe kacha nwee ihunanya bụ isoro onye ị hụrụ n'anya na -anya ụkwụ Ferris.
Anyị nwere olile anya na ị hụrụ akụkọ a n'anya na Getaways Romantic dị nso na ọ baara gị ezigbo uru.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ ntụzịaka gbasara ihe ndị ọzọ gbasara ịhụnanya na nso gị, biko mee nke ọma ịhapụ ikwu okwu, kesaakwa ndị enyi gị akụkọ a.
Tags:ọnụ ahịa ihunanya ihunanya na usa, ebe ezumike kacha mma maka ndị di na nwunye na mmefu ego, izu ike izu ụka kacha mma maka ndị lụrụ ọhụrụ 2021, ezumike izu ụka na -atọ ụtọ maka ndị di na nwunye, ezumike di na nwunye ezumike na usa, romantic beach getaways na usa, ihunanya ihunanya di na nwunye, ezumike ịhụnanya maka mmadụ abụọ
Chọta ndị enyi gị site na GPS site na iji ngwa Android ise a n'efu
Ọdụ ụgbọ elu dị na Montana nwere ọdụ ụgbọ ala yana ozi ọnọdụ nyocha
Ihe na -atọ ụtọ ime na Detroit Michigan na ebe ntụrụndụ ga -adị